မင်းသားကြီးနှင့် စာတိုပေစများ: March 2012
ကျွန်တော်နဲ့တစ်ချို့ တစ်လေ
လူတစ်ချို့ ကိုယ့်ဘဝထဲ ဝင်လာကြတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့က မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထွက်ခွါသွားကြတယ်။
တစ်ချို့က ခဏလေး ရပ်နားပေမယ့်
တစ်ချို့က ကြာကြာရပ်နားပြီး ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ကိုယ့်ရင်ဘတ်မှာလှပတဲ့ အမှတ်တရခြေရာတွေ ထွင်းရစ်ခဲ့ကြတယ်။
တစ်ချို့က ကိုယ့်ကို သိပ်မအေး၊ သိပ်မပူဘဲ သက်တောင့်သက်သာ နေနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်။
တစ်ချို့က ကိုယ့်ကို မှတ်မိနေပြီး သူ့တို့ဘေးမှာ ကိုယ်အမြဲရှိနေစေချင်ခဲ့တယ်။
တကယ်တော့ အမြဲတမ်း ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်၊ အလေးထားတဲ့လူတွေက ကိုယ့်ဘေးမှာရှိနေပြီးသားပါ...
ဘ၀ဆိုတာ မာတိကာအတိုင်းဘယ်တော့မှဖြစ်မလာဘူး လေ... ... ...။ ။
Posted by မင်းသားကြီး at 05:422comments
အတွေး ဒဿနများ (၂)
သင်ခန်းစာချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာပေါ့ ဆရာက မေးပါတယ်...
အဖြူမဟုတ်ရင် အမည်းပေါ့ ဟု ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ပြန်ဖြေပါတယ်...။
ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကိုကြည့်ရင် လူ.လောကထဲမှာ ပြဿနာရပ်
တော်တော်များများကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါအဲဒီကျောင်းသားလေးလိုမျိုး ဖြစ်နိူင်ချေ (Propability)
များစွာကိုမစဉ်းစားပဲ၊ ဆန်.ကျင်ဘက်အမြင် (Opposite View)
တွေကိုသာ ရုတ်တရက် စဉ်းစားမိတတ်ကြပါတယ်...
တစ်ကယ်က "အဖြူမဟုတ်ရင် မဖြူတာတာတွေ အားလုံး ဖြစ်နိူင်တာလေ" ... ။
ဥပမာ ကိုယ်သိထားတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုနဲ.အခြားလူပေးလာတဲ့
အဖြေတစ်ခုနဲ့ကိုက်ညီမှု မရှိတဲ့ အခါမျိုးမှာ တစ်ဘက်သူမှားနေတယ်ဆိုပြီး
ရုတ်တရက် ကောက်ချက်ချမိတတ်ပါတယ်... ကိစ္စရပ်တိုင်းမှာ
ဖြစ်နိူင်ခြေတွေ တစ်ခုထက်ပိုပြီး ရှိနိူင်တယ်ဆိုတာ၊
စဉ်းစားပုံ စဉ်းစားနည်း (The Way Of Thinking) အပေါ်မူတည်ပြီး အဖြေ ဒါမှမဟုတ်
ရလဒ်တွေဟာ တစ်နည်းတစ်ဖုံ ပြောင်းလဲသွားနိူင်တယ်ဆိုတာတွေ
"ဒါမှ ငါမှန်တယ်၊ မင်းမှားတယ် ဆိုတဲ့ အမြင်တွေက လွတ်မြောက်ပြီး
ငါလည်းမှန်တယ်၊ မင်းလည်းမှန်တယ် ဒါပေမယ့်
ပိုပြီးအားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးကို မြင်နိူင်စွမ်းရှိမှာပါ ... ...။ ။
Posted by မင်းသားကြီး at 12:262comments
အတွေး ဒဿနများ (၁)
စာသင်ခန်း တစ်ခုအတွင်းမှာပေါ့ ...
ဆရာက ကျောင်းသားတွေကို စာရွက်အဖြူရောင် ထောင်ပြပြီး ဒါဘာအရောင်လည်းလို.
မေးပါတယ်... ကျောင်းသားအားလုံးက တညီတညွတ်တည်း
ဖြေကြပါတယ်... "အဖြူရောင်ပါ ..."
ဆရာက White Borad ရဲ့ မျက်နှာပြင်ကိုထောက်ပြီး ဒါကရော ဘာအရောင်လဲလို့
မေးပြန်ပါတယ်... မဆိုင်းမတွပဲ အားလုံးကအဖြူရောင်ပါလို့ဖြေကြပါတယ်...
"အဲဒီနောက်မှာတော့ ဆရာက ခုနကစာရွက်ကို White Board မှာ ကပ်ပြီး
ဒီနှစ်ခုမှာ ဘယ်ဟာ အဖြူလဲ လို. မေးပြန်ပါတယ်"... ကျောင်းသားအားလုံး
ဖြေရန် စွံ့အ သွားပါတော့တယ်...။
ဒီအဖြစ်အပျက်လေးမှာ လူတွေသတ်မှတ်တဲ့ စံနှုန်းတွေရဲ့
လူတစ်ယောက်က ချမ်းသာမယ်...နောက်တစ်ယောက်က ပိုချမ်းသာမယ်...နောက်တစ်ယောက်က
ပိုပြီးချမ်းသာမယ် စသဖြင့်ပေါ့... သတ်မှတ်ချက်တွေမှာ အဆုံးသတ်မျဉ်း
မရှိသလို အစစ်အမှန်ဆိုတာလည်းမရှိနိူင်ပါဘူး... ဒါကြောင့် ပြသနာတစ်ခုကို
ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကို သေချာမှုမရှိတဲ့
သတ်မှတ်ချက်တွေ လာရောက်လွှမ်းမိုးတာမခံစေဘဲ တကယ့်အရှိတရား (Being) မှာပဲ
စူးစိုက်နှစ်မြှုပ်ထားနိူင်ဖို. လိုပါတယ်....ဒီလိုမှလည်း နည်းလမ်းကျပြီး
မျှတတဲ့ အဖြေတစ်ခုကို ထုတ်နိူင်မှာပါ... ... ...။ ။
Posted by မင်းသားကြီး at 22:422comments
သင်နှင့်အတူ မွေးနေ့တစ်နေ့တည်း ကျရောက်နေသူပေါင်းမှာ 10,000,000
(ဆယ်သန်း) ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒါက သင်နဲ့ အတူတူ တစ်ရက်တည်း မွေးတာနော်။
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဘ၀နဲ့အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများ
တိုက်ဆိုင်နေတဲ့တစ်ခြား သူတစ်ယောက်ယောက်ရော ရှိနေနိုင်မလား
ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့ စာတွေထဲက အမေရိကန်ရဲ့သမ္မတတွေဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့
အေဗရာဟန်လင်ကွန်းနဲ့ ဂျွန်အက် (ဖ)ကနေဒီ ကို တို့ ရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ယှဉ်ကြည့်ရအောင် ... ...
(1) သမ္ဓတကြီးလင်ကွန်းဟာ အထက်လွှတ်တော်အမတ် အဖြစ်1846 ခုနှစ်မှာရွေးချယ်ခြင်း ခံရပါတယ်၊၊
သမ္ဓတကနေဒီကတော့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် အဖြစ် 1946 ခုနှစ်မှာရွေးချယ်ခံ
(2) သမ္ဓတကြီးလင်ကွန်းဟာ 1860 ခုနှစ်မှာသမ္ဓတအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပြီး သမ္ဓတကနေဒီကတော့1960 ခုနှစ်မှာ သမ္ဓတဖြစ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်၊၊
(3) သမ္ဓတကြီးလင်ကွန်းရဲ့ အတွင်းရေးမှူးနာမည်ဟာ ကနေဒီ ဖြစ်ပြီး သမ္ဓတကနေဒီရဲ့ အတွင်းရေးမှူးနာမည်ဟာလည်း လင်ကွန်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်
(4) သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသမ္ဓတအဖြစ်အိမ်ဖြူတော်ကို ပြောင်းရွှေ့အပြီးမှာတော့ ရင်သွေးတစ်ဦးစီ ဆုံးပါးသွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်
သမ္ဓတနှစ်ဦးစလုံးဟာ သောကြာနေ့မှာ လုပ်ကြံခံရပြီး ၊ နှစ်ဦးစလုံး ဦးခေါင်းကိုပဲ
(5) သမ္ဓတနှစ်ဦးစလုံးဟာ တောင်ပိုင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ ဂျွန်ဆင်ကြောင့်ပဲ အောင်မြင်ခဲ့ရပြီး တောင်ပိုင်းသားတွေကပဲ ပစ်ခတ်လုပ်ကြံခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်
သမ္ဓတကြီးလင်ကွန်းကို နိုင်ငံရေးလောကမှာအောင်မြင်စေခဲ့တဲ့ အန်ဒရုးဂျွန်ဆင်ဟာ
1808 ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး သမ္ဓတကနေဒီကို အောင်မြင်စေခဲ့တဲ့ လန်ဒန်ဂျွန်ဆင်
ကတော့1908 ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားသူဖြစ်ပါတယ်၊၊
(6) သမ္မတ ကြီးလင်ကွန်းကို လုပ်ကြံခဲ့တဲ့ သူကတော့ ဂျွန်ဝိုက်စ်ဘုသ်ဖြစ်ပြီး သူဟာ 1839 ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားသူဖြစ်ပါတယ်၊၊ သမ္မတ ကနေဒီကိုလုပ်ကြံခဲ့သူ
ဟာဗေး အော့ဝေါ့ဒ် မှာ 1939 ခုနှစ် မှာမွေးဖွားသူဖြစ်ပါတယ်၊၊
(7)သမ္မတကြီးလင်ကွန်းဟာ (Ford) ဖို့သ် အမျိုးသားပြဇာတ်ရုံမှာ လုပ်ကြံခြင်းခံခဲ့ရပြီး သမ္မတ ကနေဒီကတော့ (Ford) ဖို့သ်ဆိုသူထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကားထဲမှာလုပ်ကြံခံခဲ့ရတာ
ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ကားနာမည်ကလဲ လင်ကွန်းလို့ ခေါ်ပါတယ်
(8)သမ္မတလင်ကွန်းကို လုပ်ကြံခဲ့သူ Booth ဟာ ပြဇာတ်ရုံမှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားခဲ့ပြီးကုန်တိုက်တစ်ခုထဲကနေ ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်၊၊
သမ္မတ ကနေဒီကိုလုပ်ကြံသူ Oswald ကတော့ ကုန်တိုက်တစ်ခုကနေ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး
(9)သမ္မတလင်ကွန်းဟာ လုပ်ကြံခြင်းမခံရမီ တစ်ပတ်အလိုမှာ Maryland ပြည်နယ် (Monroe) မွန်ရိုးရပ်ကွက်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်၊၊
သမ္မတ ကနေဒီကတော့ လုပ်ကြံမခံရမီ တစ်ပတ်အလုိုမှာ ကမ္ဘောကျော်မင်းသမီး
Marilyn Monroe မာရီလင်မွန်ရိုးနဲ့အတူရှိနေခဲ့ပြန်ပါတယ်၊၊
(10) သမ္မတနှစ်ယောက်ကို လုပ်ကြံခဲ့တဲ့ Booth နဲ့ Oswald တို့ဟာ သူတို့ကို တရားရုံးမှ ပြစ်ဒဏ် မချမှတ်ရသေးခင်မှာပဲ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်၊၊
ဒါတွေက လူသိများခဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရဲ့ တိုက်ဆိုင်မှန်းသိခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ
တစ်ချို့ တစ်လေပေါ့ ။ ဒီအဖြစ်အပျက်လိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ ဘ၀နဲ့ဆင်ဆင်တူတဲ့ လူတစ်ယောက်
ယောက် ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ရှိနေနိုင်တယ်နော် ... ... ...။ ။
Posted by မင်းသားကြီး at 07:046comments
ဂရိတွေပာာ ရှေးကတည်းက အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ သင်္ချာကိန်းတစ်ချို့ကို စဉ်းစားမိခဲ့ကြပါတယ်။
“ကိန်း” တစ်ခုပာာ သူ့ကိုပြတ်အောင်စားနိုင်တဲ့ အခြားကိန်းငယ်အားလုံးရဲ့ပေါင်းလဒ်နဲ့တူညီရပါမယ်။
အဲ့လိုအချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ပထမဆုံးကိန်းကတော့(၆)ဖြစ်ပါတယ်။(၆)ကို (၁)နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်၊(၂)နဲ့စားလို့
အဲ့လိုကိန်းစဉ်မျိုးကို ကိန်းတိ(Perfect Number)လို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲ.........အခြားကိန်းတိများကိုစဉ်းစား
ဂရိတွေက အဲ့လိုကိန်းတိမျိုး (၄)လုံးဖေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။(၆....၂၈...၄၉၆...၈၁၂၈..)တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီကိန်းတိလေးလုံးဖေါ်ထုတ်ပြီးလို့ နောက်နှစ်ပေါင်း(၁၅၀၀)လောက်ကြမှ ပဉ္စမမြောက် ကိန်းတိ
ခြောက်လုံးမြောက် ကိန်းတိကတော့(၈၅၈၉၈၆၉၀၅၆)ဖြစ်ပြီး ယနေ့အထိ ကိန်းတိပေါင်း(၁၇)နှစ်လုံး
ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးကိန်းတိက ရှည်လျားလွန်းအားကြီးလို့ ဒီစာမျက်နှာနဲ့ မဖေါ်ပြနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားများပြားနေပါတယ်။
အဲဒီ့ကိန်းတိမှာ ကိန်းလုံးပေါင်း (၁၃၇၃)လုံးပါဝင်ပါတယ်။ကဲ.........သင်္ချာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူငယ်ချင်းတို့
အတွက်ခေါင်းစားလိုက်ပါပြီ။နောက်ဆုံးကိန်းတိက ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်လား..... .... ။
Posted by မင်းသားကြီး at 22:53 1 comments
ကျွန်တော်တို့ နဲ့ပျော်ရွှင်မှုရသ
သူရဲ့ အချိန်တွေကို ငြီးငွေ့ဖို့ကောင်းစွာ ဖြတ်သန်းရင်း သူ ဆေးရုံပေါ်မှာ အချိန်ကုန်နေခဲ့တာ ၁၀ လ ကျော်ခဲ့ပြီ။ သူ့မှာ သူ့ အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုတော့လည်း ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားလုပ်စရာ မရှိတော့ပါ။ အရင်လို သူလည်း သန်သန်မာမာ သူ့အသက်အရွယ်က လုပ်ဖို့ ခွင့်မပြုတော့ ။
အခုလို သူလေဖြတ်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးအလှုပ်နိုင်ပဲ အိပ်ယာထဲမှာသာ အိပ်နေရတာလည်း ကြာခဲ့ပြီ။ သားတွေ ၊ သမီးတွေကလည်း သူ့ကို လိုလေသေးမရှိအောင် ထားပေမဲ့ အဖော်မပါပဲ မလှုပ်နိုင် ၊ မရွေ့မပြောင်းနိုင်သော သူ့အတွက် သားသမီးတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ စားစရာ ၊ အသုံးအဆောင်တွေက အဓိပ္ပါယ် မရှိသလို ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
တစ်ခါတစ်လေ သူ့ဆီကို သားသမီးတွေ စုံစုံလင်လင်နဲ့ မြေးတွေပါ လာပြီး သူ့ကို တွတ်တီးတွတ်တာ ပြောရင်း အပြင်လောကအကြောင်းကို ကြားရရင် သူ စိတ်ပျော်တယ်။ သူ့တို့ပြန်သွားပြန်ရင် သူ့ဘဝဟာ ပြန်ပြီး အထီးကျန်ဆန်ပြန်လေရော။ သူ့ဇနီးကလည်း အခုလို သူလေမဖြတ်ခင် တစ်နှစ်ကျော်က တမလွန်သို့ သူ့အရင် သွားနှင့်ပြီ။
အခု ဒီတစ်ခါ လေဖြတ်တာ ကနေ သူထပ်ပြီး အအေးဓါတ်မမျှလို့ အောက်ပိုင်း လုံးဝ မလှုပ်နိုင်သလို ဖြစ်တော့ ဆေးရုံကို သူထပ်ရောက်လာတော့ အနီးကပ်ပြုစုဖို့ အထွေထွေပြည့်စုံတဲ့ ဆေးရုံမှာ အထူးကြီးကြပ်ရေး အခန်းမှာ ထားဖို့ သားသမီးတွေကို ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ သူ ဒီဆေးရုံကို ရောက်ခဲ့တာ ၁၀ လရှိခဲ့ပြီ။ အခန်းထဲမှာ သူတစ်ယောက်တည်း ၊ အရှေ့မှာတော့ တီဗီ ရှိပါရဲ့။ သူ့လက်ဘေးနားမှာလည်း ဝါယာကြိုးနဲ့ တွဲထားတဲ့ လက်မနဲ့ နှိပ်ဖို့ ခလုတ်လေးတစ်ခု ရှိနေတယ်။
သူဘာလိုချင်လဲ။ ဘာလုပ်ချင်လဲ။ ဒီခလုပ်လေးကို နှိပ်လိုက်ရင် နပ်စ် က ချက်ချင်း ရောက်လာတယ်။ သူနေမကောင်းလို့ နှိပ်လိုက်လည်း ချက်ချင်း ရောက်လာတယ်။ အခုခုစားချင်တယ် ၊ အလေး အပေါ့ သွားချင်တယ် ဆိုလည်း နှိပ်လိုက် ချက်ချင်းရောက်လာပြီး သူ့ကို ပြုစုပြီး လုပ်ချင်တာတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။ ဒါကတော့ လွဲပြီးတော့ သူ့အခန်းမှာ သူတစ်ယောက်တည်းသာ...။
တစ်နေ့တော့ သူ့အခန်းထဲကို တွန်းကုတင်နဲ့ လူနာ နောက်တစ်ယောက်ထပ် ဝင်လာတယ်။ လူနာက သူလိုတောင်မှ မလှုပ်ရှားနိုင် ။ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပြီး ကျောရိုးမှာ ရှိတဲ့ နပ်ကြောကြီးကို ထိပြီး တစ်ကိုယ်လုံး မလှုပ်ရှားနိုင်တော့သော လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် လို့ပဲ သူသိလိုက်ရတယ်။ သို့သော် ဒီလူက ဘယ်တော့မှ ညှိုးနွမ်းနေတယ်လို့ မရှိ ။ သူလုပ်နိုင်တာ တွေးနိုင်တာတွေကို သူ့ဆီကို လာသော ဧည့်သည်တွေနဲ့ လှုပ်နိုင်သော “ ပါးစပ် ” ကို အားပြုပြီး အစွမ်းကုန်သူပြောနေတယ်။
သူကလည်း ဘယ်တော့မှ ညှိုးနွမ်းမနေသလို ၊သူ့ဆီ လာလည်နေသူတွေကိုလည်း ဟာသတွေ ပြောလိုက် ၊ ဗဟုသုတတွေ ပြောလိုက်နဲ့ သူ့ဘဝကို သူ ကျင်လည်နေတယ်။ လူကလည်း လူပျော်ဖြစ်ပုံရတယ်။ သူကတော့ ဒီလူ့ထက်ပြီးပြီး လှုပ်ရှားနိုင်ပေမဲ့ ဒီလူ့လောက်တော့ ဘဝမှာ မပျော်နိုင်ခဲ့။
ဒီလိုနဲ့ သူနဲ့ ဒီလူ ခင်မင်လာတော့ သူကလည်း သူ့အကြောင်းကို ဒီလူ့ကို ပြောပြဖြစ်တယ်။ ဒီလူကလည်း သူ့ကြောင်း သူပြောပြတယ်။ ဒါနဲ့ တစ်ခန်းလုံးမှာမှ သူတို့ နှစ်ယောက်တည်း ရှိတာ ဆိုတော့ စကားပြောစရာ နှစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။ အခန်းကလည်း နှစ်ယောက်ခန်းပါပဲ။ သူက ကုတင်ပေါ်က မဆင်းဖြစ်ခဲ့ ။ ဆင်းဖို့လည်း သူမကြိုးစား ။ နပ်စ် ပြုစုသမျှကိုသာ ကျင့်သားရစွာ သူလက်ခံ နေထိုင်ခဲ့တယ်။
သူ့နဲ့ အတူတူ နေဖို့ ရောက်လာတဲ့ ဒီလူ့ကုတင်ရှေ့မှာတော့ ပြူတင်းပေါက် တစ်ခု ရှိတယ်။ သူ တစ်ခါမှ ဒီပြူတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကို ကြည့်ဖို့ မစဉ်းစားခဲ့ ၊ စိတ်ကူးပင် မရခဲ့။ အခုတော့ ဒီလူက သူ့ကုတင် ဟိုဘက်လေးထောင်က ကုတင် ၊ ပြူတင်းပေါက်ရှေ့က ကုတင်မှာ နေရာရတယ်။ ဒါလည်း သူ့အတွက် ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားမရှိပါ။ သူထို ပြူတင်းပေါက်ကို စိတ်ဝင်စားတာ မဟုတ်။
ဒါနဲ့ ဒီလူရောက်ပြီး သုံးရက်နေတော့ ဒီလူက ပြောတယ်။ သူ ဒီပြူတင်းပေါက်ကနေ လူတွေကို မြင်နေရကြောင်း ၊ အပြင်မှာ ပန်းခြံလေး တစ်ခုရှိနေကြောင်း ၊ ပန်းခြံထဲမှာ ကလေးတွေ ဆော့နေကြကြောင်း၊ ကောင်လေးတွေက ဘောလုံးကန်နေကြပြီး ၊ ကလေးမလေးတွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပြေးလွှားဆော့နေကြောင်း ၊ ချစ်စ ခင်စ လို့ ထင်ရတဲ့ ကောင်လေး ကောင်မလေးတွေ ကလည်း ပန်းခြံထဲမှာ လျှောက်သွားနေကြကြောင်း ဒီလို ဒီလူပြောတာ သူကြားရတယ်။
အထီးကျန်လှတဲ့ သူ့အဖို့ ဒီလူ့ဆီက တဆင့် အပြင်လောကမှာ အခု ဖြစ်ပျက်နေတာကို ဒီလူက တစ်ဆင့်ပြန်ပြောပြသောကြောင့် သူလည်း အပြင်ကို လက်တွေ့ မြင်နေရသလို ခံစားရလာတယ်။
“ ဟာ..ဟာ အလစ်သမား ၊ ပိုက်ဆံအိတ် လုပြေးပြီ။ ”
ဆိ်ုပြီး လုံးဝ မလှုပ်နိုင်တဲ့ သူက ခုချက်ချင်းပဲ ထလိုက်ဖမ်းမလို ဒီလူပြောတတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေကြတော့လည်း. . .
“ ဟားဟားဟား. . အကျီင်္ အနီနဲ့ လူကြီး ချော်လဲတာဗျာ. ။ ပန်းခြံအလယ်က ရေကန်ထဲ ကျသွားတယ်။ လူတွေ ဝိုင်းဆယ်နေရတယ်။ ”
ဒီလို ပြောတတ်တယ်။ ဒီလို ရယ်စရာ ၊ ပျော်စရာလေးတွေ ကြားရတော့ သူကလည်း သူကိုယ်တိုင် မြင်ရသလို ဖြစ်ကာ ရယ်မိ ၊ ပြုံးမိတတ်တယ်။ သူလည်း အရင်လို ပျင်းခြောက်ခြောက်နဲ့ ဘဝကို အထီးကျန်ဖြတ်သန်နေရလို မဖြစ်တော့ဘူး.။ သူ မြင်လို့ ပြန်ပြောသမျှကို ကိုယ်ကလည်း တကယ်မြင်နေရသလို ကြားရပြီး ကိုယ်လည်း စိတ်လှုပ်ရှားရတယ်။
ဒါပေမဲ့ နှစ်လလောက်ကြာလာတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်။ ဘာလို့ လုံးဝတောင်မှ မလှုပ်နိုင်တဲ့ ဒီလူက ပြူတင်းပေါက်နားကို သွားနေရာကပြီး အပြင်က အဖြစ်အပျက်တွေကို မြင်နေရ ကြားနေရတာလဲ။ နည်းနည်းတော့ လှုပ်နိုင်နေတဲ့ သူက ဘာလို့ ဒီပြူတင်းပေါက်နားကို နေရာ မရတာလဲ ။ သူကရော ဘာလို့ ဒီလို ပြူတင်းပေါက်က တဆင့် အပြင်က အဖြစ်အပျက်တွေကို ဘာလို့ တိုက်ရိုက် မကြည့်ရတာလဲ ..၊ သူ ဒီလိုတွေ တွေးမိပြီး ဒီလူကိုတောင်မှ မနာလိုသလို ဖြစ်လာတယ်။
ဒါနဲ့ နောက်နေ့တွေ ဒီလူက ပန်းခြံထဲမှာ ဘာတွေ ဘယ်လို ဖြစ်နေတယ် လို့ ပြောရင် သူက စိတ်မဝင်စားသလိုနဲ့ တစ်ဖက်ကို စောင်းပြီး အိပ်ချင်ယောင်ဆောင် နေလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလူကတော့ သူဘယ်လိုပဲ နေနေ ပြောမြဲအတိုင်းပြောနေတာပါပဲ။ ဘယ်သူကတော့ ဘယ်လို ဖြစ်သွားတယ်။ ပန်းခြံထဲ ရုပ်ရှင်လာရိုက်ကြတယ်. .စသဖြင့်ပေါ့။ သူကတော့ ပြူတင်းပေါက်က တဆင့် အပြင်လောကကို မမြင်ရတော့ ပိုပြီး သူ့ကို မနာလို ဖြစ်မိတယ်။
တစ်နေ့. . .
ညဘက် သူ အိပ်နေတုန်း ဟိုဘက်ကုတင်က အသံတွေ ကျယ်လောင်စွာ ကြားရတယ်။ ဒီလူ အသက်ရှူကြပ်ပြီး အသက်ကို ပြင်းစွာ ရှူနေရသံကို သူ ကြားရတယ်။ သူလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဘာဖြစ်မှန်း မသိပေမဲ့ ဒီလူ အသက်ကို မနည်းရှူနေရတယ်။ ဒီလူ အရေးပေါ်အကူအညီ ခေါ်ဖို့ လုပ်ပေးထားတဲ့ ခလုတ်လေးက သူအိပ်ရင်း တိုက်မိလို့ ကုတင်ပေါ်ကနေ ကုတင်ဘေးကို တွဲလောင်းလေးကျနေတယ်။ မလှုပ်နိုင်တဲ့ ဒီလူ ခလုတ်လေးကို နှိပ်ပြီး နပ်စ်ကို ခေါ်ဖို့ ဘယ်လိုမှ ခလုပ်ကို သူ့လှုပ်လို့ရတဲ့ နည်းနည်းလေးနဲ့ လျှောက်စမ်းပြီး ရှာတယ်။
ခလုတ်က ကုတင်ဘေးကို တွဲလောင်းကျနေတော့ ဒီလူ အသက်ကို ပင်ပန်းစွာ ရှူရင်း ခလုတ်လေးကို စမ်းနေတယ်။ အောက်ဘေးကို တွဲလောင်းကျနေတာ ဒီလူ မသိ။ သူ သူ့ကုတင်းပေါ်က သူ့လက်နားမှာ ရှိနေတဲ့ ခလုတ်လေးကို စမ်းလိုက်တော့ သူ့လက်မှာ အလွယ်တကူ စမ်းလို့ တွေ့တယ်။ သူ ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ရင်လည်း တာဝန်ကျ ဆရာမက အပြေးအလွှားရောက်လာမှာပါပဲ။ ဘယ်သူပဲ နှိပ်နှိပ်ပေါ့။ သူ ခလုတ်လေးကို နှိ်ပ်ပြီး ဒီလူ့အစား နပ်စ် ကို ခေါ်မယ် စဉ်းစားနေတုန်း သူ့အသိဥာဏ်ထဲကို အတွေးတစ်ခုက ဝင်လာတယ်။
နှစ်ယောက်တည်း နေလို့ရတဲ့ ဒီအခန်းမှာ ဒီလူ ရှိနေလို့ ငါ ပြူတင်းပေါက်နားက ကုတင်မှာ နေခွင့်မရတာ ဒီလူသာ မရှိရင် ပြူတင်းပေါက်နားက ကုတင်ကို ပြောင်းပြီး အပြင် ပန်းခြံထဲကို ကြည့်ခွင့်ရမှာပဲ။ မခေါ်တော့ဘူး ဆိုပြီး သူ တစ်ဖက်လှည့်ပြီး အိပ်ပျော်အောင် အိပ်နေလိုက်တယ်။ တစ်ဖက် ကုတင်မှာတော့ ဒီလူ အသက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ပြင်းပြင်း ရှူသံတွေကို ကြားနေရတယ်။ နောက်တော့ သူလည်း တကယ်ကို အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။
မနက်မိုးလင်းတော့ ဆရာဝန်တွေ ၊ နပ်စ်တွေ ရောက်လာပြီး ဒီလူကို စစ်းဆေးပြီး သေဆုံးသွားပြီ ဆိုကာ အဝတ်နဲ့ အုပ်ပြီး တွန်းလှည်း ကုတင်ပေါ်ပြောင်းတင်ပြီး ဒီလူ့အလောင်းကို သယ်သွားကြတယ်။ ဒီအချိန်အထိ သူဘာမှ မပြောသေးပါ။ ဒါနဲ့ နောက်ထပ် ၂ ရက်လောက်နေမှ နပ်စ်တွေနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကို သူက သူ့ကို ပြူတင်းပေါက် ရှေ့မှာ ရှိနေတဲ့ ကုတင်ကို ပြောင်းပေးဖို့ သူတောင်းဆိုတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ဘာမှ မခက်ခဲတော့ သူ့ကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ပြောင်းပေးလိုက်ကြတယ်။
သူလည်း ပျော်ရွှင်စွာ ပြောင်းလာခဲ့ပြီး နပ်စ်တွေ ၊ တာဝန်ရှိသူတွေ အားလုံး လုပ်စရာ ရှိတာတွေ လုပ်ပြီး သူတစ်ယောက်တည်း ကျန်တော့မှ သူလဲနေရာက နေ အားတင်းကြိုးစားထပြီး ပြူတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကို ကြည့်လိုက်တယ်။ ဒီမှာ သူ အံ့သြစွာနဲ့ မှားယွင်းစွာ တွေ့လိုက်ရတယ်။
“ ပြူတင်းပေါက်ရဲ့ အပြင်ဆိုတာမှာ သူမြင်နေရတာက အုတ်နံရံမျှသာ. . .”
သူ့အတွက် ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဒီလူက နှလုံးသားနဲ့ မြင်အောင် ပြသွားခဲ့ခြင်းသာ ...
ကျွန်တော်တို့ လည်း ဒီအကြောင်းအရာထဲက လူလို့ ပါပဲ ကိုယ်ရဲ့လိုအင်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ ကို
ပျော်ရွှင်မှုပေးနေတဲ့ တစ်ချို့ ကိစ္စတွေကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖျက်ဆီးခဲ့ကြဘူးပါတယ် .... ...။
Posted by မင်းသားကြီး at 12:060comments
အလုပ်သင်ဆရာဝန်တစ်ယောက်က ၀ါရင့်သမားတော်ကြီးကို မေးတယ်
“ခင်ဗျာ ၀မ်းနှုတ်ဆေး ၊ ဟုတ်လား ၀မ်းနှုတ်ဆေးက ချောင်းဆိုးတာကို
PS: ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လဲ တစ်ခါတစ်လေ သမားတော်ကြီးလို
ချောင်းဆိုးတဲ့လူနာနဲ့ တူတဲ့လူတွေကို ၀မ်းနှုတ်ဆေးပေးတတ်ပါတယ် .... ....
Posted by မင်းသားကြီး at 14:533comments
အမှတ်တမဲ့ နင့်ကို လွမ်းမိပါရဲ့ ....
နင်နဲ့...တဖြည်းဖြည်း....ဝေး................ဝေးနေဆဲ.... ။ ။
Posted by မင်းသားကြီး at 14:512comments
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကဗျာတွေထဲက တစ်ပုဒ်ပေါ့ ၊ ကျွန်တော်လဲကျတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ဒီကဗျာလေးက ကျွန်တော့်အတွက် အားဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ အားဆေးပေါ့ဗျာ ... ။
Posted by မင်းသားကြီး at 03:117comments
နင့်ကို ငါ - - ချ စ် တ ယ်
အခါမလပ်တော့ -- ရင်တစ်ခုလုံး ၀ုန်းဒိုင်းဆန်လျှက်ပါပဲ
အသိနက်နက်တွေရဲ့ အတွင်းပိုင်းထဲ ငါ မြှုပ်နှံထားခဲ့တယ်
နင့်ကို ငါ ---ချစ်တယ်
သစ္စာတရားနဲ့ မြတ်နိုးခြင်းကို ထပ်တူပေါင်းစပ်လို့
“ You are the one for me ”
တိုးတိုးလေးဆိုညည်း --ညနေခင်းတချို့တောင် ပြာရီလင်းညှို့လို့
နင်ကလည်း တခါတခါ ဆိုးတယ်
ဘ၀ ဆိုတာ --- တခါတခါ မိုက်မဲရူးသွပ်လိုက်ခြင်းဟာလည်း ချိုမြိန်ပ
ငါဟာ စိတ်တွေကို ဆွဲဖွင့်လို့ နင့်ကောင်းကင်ထက် ရွက်လွှင့်နေခဲ့သူ
ဒါဟာလည်း အရိုးသားဆုံးအမှန်တရား --
နင့်ကို ငါ -- ချစ်တယ်
နင့်ကို ငါ - - - အုံ့အုံ့သည်းသည်းကို ချစ်မိသွားတယ်
သက်တန့် ချိုတင်ပေးထားတဲ့ လွမ်း-နေရဲ့ကဗျာလေးပါ သူရဲ့ကဗျာလေးတွေကို
ဖတ်ချင်သေးရင်တော့ ဒီကနေသွားလိုက်ပါ >> Lw@n-n@y's Poems <<
Posted by မင်းသားကြီး at 01:560comments
ပေါ့ပျက်ပျက် ရယ်သွမ်းသွေး လောကကြီးကို
အရေး မထားတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ထဲမှာ
နင့်အတွက် နှုးညံ့တဲ့ သံစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုတာ
ပျော်ရွှင်ခြင်းသာရှိတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ
နင့်အတွက် လွမ်းခြင်းဆိုတာ ရှိတယ်
Posted by မင်းသားကြီး at 02:282comments
ဒီလိုတွေးတယ် .. :)
၁။ ပျော်ရွှင်မှုကို ငွေကြေးနဲ့ ၀ယ်ယူလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စက်ဘီးပေါ်မှာ ထိုင်ငိုနေတာထက်စာရင် မာစီဒီး ဘင့်ဇ် ကားပေါ်မှာ ငိုရတာက ဇိမ်ပိုမကျဘူးလား။
၂။ သင့်ရဲ့ရန်သူကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ မျိုးမစစ်ကောင်ရဲ့ နာမည်ကိုတော့ မှတ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
၃။ လူတစ်ယောက် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ သင်ကူညီလိုက်ရင် အဲဒီလူက သင့်ကို အမှတ်ရနေမှာပါ။ အဲ.. သူနောက်တစ်ခါ ဒုက္ခထပ်ရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ပေါ့။
၄။ လူတော်တော်များများအသက်ရှင်နေကြတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ လူသတ်တာဟာ တရားမ၀င်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
၅။ အရက်သောက်လို့ ပြဿနာတွေပြေလည်မသွားပါဘူး။ ဒါဆို နွားနို့သောက်လို့ရော ပြေလည်သွားမှာမို့လို့လား။
Posted by မင်းသားကြီး at 00:280comments
အသက်ကြီးရင့်ပြီ ဖြစ်တဲ့ လက်သမားဆရာကြီးတစ်ယောက်ဟာ သူ့အလုပ်ကနေ
ရပ်နားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့ အိမ်ဆောက်တဲ့ အလုပ်ကနေ ရပ်နားပြီး
သူ့မိန်းမနဲ့အတူ မိသားစုဘ၀ကို အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ
ဖြတ်သန်းတော့မယ့်အကြောင်း သူ့ရဲ့ အလုပ်ရှင်ကို အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။
အပတ်စဉ် ၀င်ငွေရနေတဲ့ ဒီအလုပ်ကို သူ နှမြောပေမယ့် သူ နားချင်ပြီ။ နားကို
နားတော့မယ်လို့ စိတ် ဒုန်းဒုန်းချလိုက်တယ်။
အလုပ်ရှင်ဟာ လူတော်တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးရမှာကို အရမ်းနှမြောနေတယ်။ သူ့ဆီကနေ
အလုပ်ထွက်သွားတာကိုလည်း သူ မလိုလားဘူး။ အရမ်းလည်း ၀မ်းနည်းမိတယ်။ ဒါနဲ့
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အိမ်တစ်လုံးတော့ ဆောက်ပေးပါဦးလို့ တောင်းပန်ပြီး
ဆွဲထားလိုက်တယ်။ အလုပ်ရှင်က တောင်းဆိုနေတော့ သူ ခေါင်းညိတ်လိုက်ရပေမယ့်
သူ့ရဲ့ စိတ်မပါလှတဲ့ လုပ်ရပ်တွေက အတော်လေးကို သိသာနေတယ်။ သူနားချင်တာ
မနားရတော့ အလုပ်ရှင်အပေါ်မှာလည်း ငြိုငြင်မိနေတယ်။ ခါတိုင်း အနုစိတ်ပြီး
တိတိကျကျ လုပ်တတ်သမျှ အခုတော့ အိမ်တစ်လုံး မြန်မြန်ပြီးဖို့ ဆိုတာပဲ
အတွေးက ရှိတယ်။ သူနားချင်ပြီ။ ဒီအလုပ်ပြီးရင် သူ့အလုပ်ရှင်က ပေးနားမယ်။
ဒီတော့ မြန်မြန် ပြီးရမယ်ပေါ့။ သူ့ဘ၀ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုမှာ ဒါ
သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး လက်ရာ ဖြစ်ကျန်နေမယ်ဆိုတာကို သူ လုံးလုံး
လက်သမားဆရာကြီးဟာ သူရဲ့ နောက်ဆုံးအိမ်လေးကို ဆောက်လို့ ပြီးသွားတော့
အလုပ်ရှင်ဟာ အိမ်ကို လာစစ်ဆေးပါရော။ အသေအချာ စစ်ဆေးပြီး အလုပ်ရှင်ဟာ
အိမ်တံခါးကို ပိတ်လိုက်တယ်။ နောက် တံခါးသော့ကို လက်သမားကြီးရဲ့ လက်ထဲ
ထည့်လိုက်ပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ အကြည့်နဲ့ ပြောလိုက်တယ်။
"ဒီနေ့ကနေ စပြီး ဒါ ဆရာကြီးရဲ့ အိမ် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါ ကျနော်ရဲ့ လက်ဆောင်ပါ။"
ရှက်စရာ ကောင်းလိုက်တာ။ တကယ်လို့ သူ ဆောက်နေတဲ့ အိမ်ဟာ သူ့
ကိုယ်ပိုင်အိမ် ဆိုတာသိခဲ့ရင် သူ ဒီလို လုပ်ပါ့မလား။ ဒီလောက် ပစ္စလက်ခတ်
ကျနော်တို့ရဲ့ ဘ၀တွေဟာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဘ၀တွေကို ကျနော်တို့
ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်နေရတာ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် တခါတခါ ကျနော်တို့ စွမ်းအား
ရှိသလောက် ဒီ ဆောက်လုပ်ရေးမှာ ထုတ်မသုံးဖြစ်ဘူးနော်။ နောက်ဆုံး
ကျနော်တို့ ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်မှာ နေရတော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်ကျမှ
ကျနော်တို့ အကြီးအကျယ် ပြာယာခတ်ကုန်တယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်ပြီး
ပြန်လည်တည်ဆောက်ခွင့် ရှိရင်တော့ အရင်ကထက် ထူးထူးခြားခြား
တကယ်တမ်းကော ကျနော်တို့ နောက်ပြန်သွားလို့ ရပါ့မလား။ ကျနော်တို့ဟာ ဘ၀ကို
ပုံဖော်နေတဲ့ လက်သမားဆရာတွေပါ။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သံရိုက်ကြတယ်၊ နံရံကို
တည့်မတ်ကြတယ်၊ အမိုးမိုးနေကြတယ်။ ဒီနေ့ လုပ်လိုက်တဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့
အပြုအမူ၊ ရွေးချယ်မှုနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဟာ မနက်ဖြန် ကျနော်တို့နေဖို့
အိမ်အတွက် ကုန်ကြမ်းတွေပါ။ အထောက်အပံ့တွေပါ။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ဥာဏ်ပညာ ရှိရှိနဲ့ ဆောက်လုပ်ကြပါစို့လား။
တစ်ခါတုန်းကပေါ့ အလုပ်သင်ဆရာဝန်တစ်ယောက်က ၀ါရင့်သမာ...